Life in Fukuoka "Nepali" Vo.103
आवास（住宅） , नियम तथा आचरण（ルール・マナー）
【काफुन्बाट बच्ने उपाय】
यो न्यानो हुँदै आउने मौसममा हुने समस्या भनेको काफुन्स्यो हो। काफुन्स्यो भनेको आँखा चिलाउने, खोकी लाग्ने अनि नाकबाट पानी बग्नु हो।
काफुन् एकदमै सानो र हावामा सजिलै तैरिन सक्ने पदार्थ हो।
भ्याकुम क्लिनर प्रयोग गर्नाले वा कुचोले बराल्नाले, काफुन् हावामा फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ, घरमा गर्न सकिने उपायको रूपमा, भुइँमा भएको काफुन्लाई, पुछ्ने कपडा वा क्लिनिंग शीट प्रयोग गरेर सफा गर्नाले प्रभावकारी हुन्छ।
बारम्बार पुछ्ने, सफा गर्ने, एयर प्युरिफायर जडान गर्ने आदि गर्नाले काफुन् मात्र होइन, अन्य मसिना धुलोहरूको लागि पनि उपयोगी हुन्छ।
साथै, बाहिर जाने लुगाहरूमा काफुन् पनि धेरै टासिएको हुन्छ। त्यसैले, घर पुग्दा, ढोकामै आफ्नो कोट फुकालेर, त्यसमा टासिएको काफुन्लाई तक्तकाएर झार्नु पनि आवश्यक छ।
【बसाईसराईको प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो पूरा गर्नु】
〇 मार्च र अप्रिलमा बसाईसराई धेरै हुने भई वार्ड अफिसको काउण्टरमा भीड हुने समय हो।
बसाईसराईको प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो पूरा गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं।
सप्ताहका दिनहरुमा व्यस्त भई बसाईसराईको सूचना दर्ता गर्न जान असमर्थ हुनुहुने महानुभावहरुले बिदाका दिनमा बसाईसराईको प्रक्रिया गर्न सकिने गरि मार्च २७ र अप्रिल ३ को आइतबार, प्रत्येक वार्ड कार्यालय र शाखा कार्यालयका काउण्टरहरू अस्थायी रूपमा खोलिनेछन्।
बिहान १०:०० बजेदेखि दिउँसो २:०० बजेसम्म, बसाईसराईको सूचना वा बसाईसराई सम्बन्धित सूचना दर्ताहरू स्वीकार गर्दछौं।
यदि फुकुओका शहरभन्दा बाहिर बसाई सर्दै हुनुहुन्छ भने, सर्ने दिनसम्ममा वार्ड अफिसमा बसाई सरेर जादैछु छु भन्ने सूचना दर्ता गर्नुभएमा, सरुवा भई जाने ठाउँको आवश्यक बसोबास सरुवा प्रमाणपत्र पाउनुहुनेछ।
यदि फुकुओका शहरभित्र बसाई सर्दै हुनुहुन्छ भने, बसाईसराई सूचना दर्ता गर्न आवश्यक छैन तर, नयाँ ठेगानामा बस्न थाल्नु भएको दिनदेखि १४ दिनभित्र तपाईं सर्नुभएको वार्ड अफिसमा बसाईसराई सूचना बुझाउनुपर्छ।
वार्ड अफिसमा बसाईसराईको प्रक्रियाका लागि सुविधाजनक अनलाइन सेवा पनि छ।
शनिवार, आइतवार, र सार्वजनिक बिदाका बाहेक, कम्तिमा ५ दिन अगाडिसम्ममा स्मार्टफोन आदिबाट ठेगाना परिवर्तन वा प्रक्रियाको अपेक्षित मिति आदिको जानकारी पठाउनुभयो भने बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र काउण्टरमा प्रक्रियाको समय कम लाग्छ।
〇यस अतिरिक्त, बसाईसराई गर्दा, खानेपानी आपूर्ति शुरु गर्न वा रोक्नका लागि सुचना दिन आवश्यक छ। शनिवार, आइतवार र सार्वजनिक बिदाका बाहेक, सर्ने दिनभन्दा कम्तिमा ४ दिन अगाडिसम्ममा फोनमार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
फोन नम्बर ०९२-५३२-१०१० हो।
【बसाईसराई फोहर सम्बन्धि】
वसन्त ऋतुमा स्थान परिवर्तनको कारण फर्निचर र घरेलू उपकरण जस्ता ठूला आकारको फोहर बढ्ने समय हो।
यस पटक, ठूला आकारको फोहोर रिसेप्शन सेन्टरमा आबेदन दिने तरिका सम्बन्धि जानकारी दिनेछु।
फोन, इन्टरनेट वा फुकुओका सिटीको LINE मार्फत अग्रिम आवेदन दिई, कन्भिनीयन्स स्टोर आदिमा प्रशोधन टिकट खरीद गर्नुहोस्।
फोहर संकलन, आवेदन दिएको मितिबाट एक हप्ता लाग्नेछ।
संकलनको दिनमा बिहान ८:३० सम्म तोकिएको ठाउँमा राख्नुहोस्।
ठूला आकारको फोहोर रिसेप्शन सेन्टरको फोन नम्बर ०९२-७३१-११५३ ।
इन्टरनेट वा LINE मार्फत २४ घण्टा जहिलेपनि आवेदन दिन सकिने भएकोले सुविधाजनक छ।
टिभी, फ्रिज, फ्रिजर, वाशिंग मेशिन, कपडा ड्रायर र एयर कन्डिशनरहरूको हकमा घरायसी सामान प्रशोधन कानुन बमोजिम फोहर फाल्ने विधि तोकिएको छ।
नयाँ जडान गर्ने बेला लगिदिनुहुन्छ कि भनेर खरिद गर्नुभएको पसल वा नजिकैको Best Denki वा Yamada Denki मा सोध्नुहोला। रिसाइकल शुल्क, संकलन र यातायात शुल्क तिर्नु पर्छ।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.102
【”ह्वाईट डे” को परिचय】
तपाईंहरु प्रायःजसोलाई थाहा नै होला, फेब्रुअरी १४ तारिक भनेपछि भ्यालेन्टाईन डे अर्थात् प्रेम दिवस! जापानमा, यस दिन सामान्यतयाः केटिले मन पर्ने केटा वा सँधै आभारी भएका व्यक्तिहरुलाई चकलेट दिने चलन छI अनि चकलेट पाएको केटाले फेरी त्यो केटीलाई मार्च १४ मा चकलेट दिने गरिन्छ जुन दिनलाई ह्वाईट डे भनिन्छI भ्यालेन्टाईन डे संसारभर मनाउने चलन छ, तर ह्वाईट डे जापान, चीन, दक्षिण कोरिया आदि केही देशहरूमा मात्रै मनाउने गरेको देखिन्छ।
सन् १९६५ को अन्त्यदेखि ५० को दशकमा यो चलन फैलिएको भनिन्छ। यो दिवस केही मिठाई वा चकलेटका उत्पादनकर्ताको विचारबाट उब्जिएको वा लामो समयदेखि स्थापित मिठाई पसलले शुरु गरेको भन्ने मान्यता पनि रहेको देखिन्छ।
विशेष गरी यहाँ फुकुओका शहरमा Ishimura-mansei-dou को सोचबाट आएको Marshmallow Day निकै लोकप्रिय छ ।
पहिलेका समयमा, सेतो चकलेट, क्यान्डी र Marshmallow विशेष मानिन्थ्यो भने आजकल जुनसुकै मिठाई पनि यस दिनमा आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ।
यस दिवसका लागि विशेष बिक्री काउण्टर पनि राखिने भएकोले, किनमेल गरेर मनोरञ्जन लिने अवसर पनि हो।
दोस्रो पटकको खोप लिईसक्नु भएका, १८ वर्षका वा सोभन्दा माथिका फुकुओका शहरको नागरिकहरुलाई, फुकुओका शहरले तेस्रो पटकको खोप लिनका लागि खोप कुपन हुलाक मार्फत् पठाउनेछ।
दोस्रो पटकको खोप लगाएको लगभग ७ महिनापछि पनि खोप कुपन पाउनु भएन भने, कल सेन्टरमा फोन गर्नुहोला।
【बसोबास कर छुट भएका परिवारहरूका लागि आपतकालीन विशेष अनुदान रकमको सूचना】
अनुदान रकमको बारेमा परामर्श लिन सकिने फोन नम्बर, ०१२०-०१८-०९२ हो।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.101
【DJ को Choice ‘नयाँ जीवनको लागि उपयोगी जानकारीहरु’】
चाहे स्कूलको लागि होस् वा काम आदिको लागि, हाम्रो जीवनमा धेरै पटक चीजहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र जापानमा नयाँ शैक्षिक वर्ष वा नयाँ कामको शुरुवात अप्रिलको १ तारिकमा हुने गर्छ।
जापानमा अप्रिलको समय, विद्यार्थीहरू नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुने, अर्को कक्षामा जाने, काम गर्नेहरु नयाँ कम्पनीमा प्रवेश गर्ने वा सरुवा हुने, जागिर परिवर्तन गर्ने गर्छन्। यस समयमा, घर सर्ने मानिसहरू पनि धेरै हुन्छन्।
त्यसैले फेब्रुअरी र मार्चमा आफ्नो जीवनको नयाँ अध्यायको लागि तयारीहरु गर्ने गर्छन्।
＜फुकुओका शहरभित्र वा बाहिर बसाइँ सर्ने बारे＞
फुकुओका शहरभित्र बसाइँ सर्ने योजनामा हुनुहुने वा फुकुओका शहरबाट बाहिर जाने योजनामा हुनुहुने कसैले आजको यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ कि?
यदि बसाइँ सर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले बसाइँ सर्ने सूचना दर्ता गर्न आवश्यक छ। सर्नु अघि, आफ्नो स्थानीय वार्ड कार्यालयमा गएर आवश्यक कागजातहरू लिने गरौं।
बसाइँ सर्ने प्रक्रिया वा लिएर जानुपर्ने आदि बारे बुझ्नका लागि फुकुओका शहरको आधिकारिक LINE Account वा फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउन्डेसनको होमपेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
म फुकुओका शहरबाट कहिल्यै बाहिर बसाइँ सरेको छैन, त्यसैले सौभाग्यवश कागजी कार्यहरू गर्नुपरेको छैन। बरु फुकुओका शहरभित्र नै बसाइँ सरेको छु तर उही नै वार्ड भएकोले धेरै कागजी कार्यहरू गर्नु परेन। तर खानेपानी, ग्यास, बिजुली र इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई फोन गरेर, आफू सर्दै छु भनेर सुचना दिई, बसीरहेको ठेगानामा सेवा रोक्न र सर्न लागेको नयाँ ठेगानामा सेवा लिनका लागि सम्पर्क गरेको थिएँ। नयाँ ठाउँमा सर्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरुमध्ये एक हो; फुकुओका अध्यागमन ब्यूरोमा पनि आफ्नो ठेगाना परिवर्तन भएको जानकारी दिई जाइर्यु कार्डमा पनि नयाँ ठेगाना खुल्ने गरि राख्नुपर्छ । त्यस्तै, आफू सरेर गएपनि आफ्नो पुरानो ठेगानामा आएको चिठीपत्रहरु नयाँ ठेगानामा पठाउन मिल्ने गर्नका लागि हुलाक अफिसमा आबेदन दिनुपर्छ । साथै, आफ्नो खाता खोलेको बैकमा पनि नयाँ ठेगानाको जानकारी गराउनु राम्रो हुन्छ । यो गर्न पनि खासै गार्हो छैन।
यी सबै नियमकानुन अनुसारको कागजी कार्यहरु तथा प्रकियाहरु बाहेक, बसाइँ सर्दा आवश्यक अर्को कुरा भनेको, सर्दा सामान ओसारपसार गरिदिने कम्पनी खोज्नु हो। बजारमा थरिथरि कम्पनिहरु छन् अनि शुल्क पनि फरक फरक, त्यसैले निर्णय लिन अगाडि बुझेर हेर्नु राम्रो हुन्छ। सर्ने दिन पहिले नै थाहा भएमा अग्रिम बुकिंग गरेर राख्नु बेश हुन्छ नत्रभने अप्रिलको पिक सिजनमा आफूलाई पायक पर्ने समयमा खोज्न अति गार्हो हुन्छ।
यदि सामानहरु प्याक गर्न कार्डबोर्ड बक्सहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, सुपरमार्केटहरूमा सामान्यतया प्रयोग नगर्ने कार्डबोर्ड बक्सहरू निःशुल्क लिन सक्नुहुन्छ।
साथै, पक्कै पनि Life in Fukuoka कार्यक्रमको विगतका ब्लगहरू र पोडकास्टहरू चेक गर्नुहोला।
फुकुओकामा बसोबास गर्न सरल बनाउन मद्दत गर्ने धेरै जानकारीहरु राखिएका छन्।
यस अतिरिक्त, फुकुओका शहरको होमपेजमा, Life in Fukuoka को डिजिटल पर्चा र भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। सबैजनाले सुरक्षित र दुक्क भई फुकुओका शहरमा आरामदायक जीवनयापनका लागि, समस्या पर्दा परामर्श लिने ठाउँ वा क्षेत्रको जानकारी, बसाइँका लागी पालन गर्नुपर्ने नियम र आचरणहरू आदि जानकारीहरु यसमा समावेश छन् । वेबसाइट लिङ्कको लागि LOVE FMको वेबसाइटमा Life in Fukuoka को पृष्ठमा आजको कार्यक्रमको ब्लगमा हेर्नुहोला।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.100
【शिरोउओ माछा मार्ने अर्थात् आइस गोबी (Ice Goby) माछा मार्नेबारे जानकारी】
फुकुओकामा वसन्तको आगमनको रुपमा चिनिनेहरुमध्येमा एक हो, शिरोउओ माछा मार्ने। शिरोउओ माछालाई अंग्रेजीमा Ice Goby भनिन्छ। शिरोउओ माछा गोबी समूहमा पर्ने, शारीरिक लम्बाइ ४ देखि ५ सेन्टिमिटर र पारदर्शी शरीर भएको सानो माछा हो।
यो माछा सामान्यतया समुन्द्रि किनारमा कम गहिराईको पानीमा बस्छ। वसन्तको प्रारम्भमा, अण्डा पार्नको लागि नदीमा जान्छ र यसले बालुवामुनि अण्डा पार्छ। विशेष गरी, फुकुओका शहरको मुरोमी-गावा नदीमा आयोजना हुने शिरोउओ माछा मार्ने तरिकालाई एडो कालदेखिको परम्परागत माछा मार्ने तरिका भनेर चिनिन्छ।
हाल, फुकुओका प्रिफेक्चरमा शिरोउओ माछा मार्ने काम हुँदै आईरहेको एक मात्र नदी, मुरोमी हो जहाँ अप्रिलको मध्यसम्म माछा मार्ने जारी रहनेछ। नजिकै शिरोउओ माछा खान पाइने रेस्टुरेन्टहरू छन् जहाँ सूप, टेम्पुरा, र तामागोतोजी जस्ता विभिन्न तरिकाले यो माछा खान सक्नुहुन्छ तर सबैभन्दा भिन्न तरिकाबाट खाने भनेको odori-gui हो । जिउँदो शिरोउओ माछालाई जालीको पन्युले लिएर, भेनेगर र सोया सससँग मुखमा खन्याएर खानाले, मुखभित्र फुत्तफुत्त उफ्रेको जस्तो विशेष खालको खानाको स्वादको अनुभव लिन सक्नुहुन्छ । यो अलि अनौठो त छ, तर पनि हिम्मत हुने व्यक्तिहरुले, प्रयास गरेर हेर्नुहोला ।
【शहर तथा प्रान्तीय कर फाइल गर्ने सम्बन्धि】
○फुकुओका शहरले रेइवा ४ को शहर तथा प्रान्तीय कर फारम पठाईएको छ।
कर फाइल गर्ने म्याद, मार्च १५ मंगलबारसम्म हो। वार्ड कार्यालयको कर बिभागले सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९:०० बजेदेखि बेलुका ५:०० बजेसम्म कर फाइल स्वीकार गर्दछ।
काउण्टर भिडभाड हुने भएकोले, कृपया हुलाक वा अनलाइन, त्यस्तै अस्थायी काउण्टरमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
फुकुओका शहरमा कर फाइल गर्न आवश्यक व्यक्तिहरु भन्नाले, २०२२ को जनवरी १ देखि फुकुओका शहरभित्र ठेगाना भई २०२१मा आम्दानी भएका व्यक्तिहरु पर्छन्।
कर कार्यालयमा अन्तिम कर फिर्ती निवेदन पेश गर्नुहुने वा तलब आय मात्र भएको व्यक्तिको हकमा कम्पनीमा वर्षान्तको समायोजन गर्नुहुने आदिले कर फाइल गर्न आवश्यक छैन।
कर फाइलका लागि आवश्यक कागजातहरु,
• माइनम्बर कार्ड वा माइनम्बर बुझ्न सजिलो कागजपत्र र सवारीचालक परिचय पत्र, पासपोर्ट, बसोबास कार्ड आदि पहिचान खुल्ने कागजातहरू
• गेन्सेन्च्योउस्युउह्योउ आदि जस्ता २०२१ को आय देखाउने कागजातहरु
• २०२१ मा गरिएको कटौतीहरुको कागजातहरू
अस्थायी कर काउण्टर वा, आवश्यक कागजात वा कर फाइल गर्न आवश्यक छ छैन आदि बारे बिस्तृत जानकारीका लागि कृपया आफू बसोबास गर्दै आएको स्थानीय वार्ड कार्यालयको होमपेजमा हेर्नुहोला। नबुझेको कुरा भएमा टेलिफोन अनुवाद हटलाइन प्रयोग गरेर वार्ड कार्यालयमा सोध्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियाली, भियतनामी र नेपाली जस्ता १८ वटा भाषाहरुमा परामर्श लिन सकिन्छ।
फोन नम्बर, ०९२-७५३-६११३ हो।
यो नम्बरबाट, शुरुमा दोभाषे सेन्टरमा फोन लाग्छ, त्यसपछि वार्ड अफिसमा सम्पर्क हुन्छ।
तपाईं आफू बस्ने वार्ड र कर फाइलबारे बुझ्न चाहेको भन्नुहोला।
यस अतिरिक्त, वार्ड कार्यालयमा जानुहुँदा पनि आफ्नो फोन प्रयोग गरेर यस सेवा मार्फत् अनुवाद गर्न सकिने भएकोले नहिच्किचाइकन यसको प्रयोग गर्नुहोला।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.99
आवास（住宅） , अन्य（その他）
फेब्रुअरी २२ "बिरालो दिवस" हो। "बिरालोसँग बस्दा पाउने खुशीप्रति धन्यवाद दिंदै , बिरालोसँगै यो खुशी बाड्नको लागी वार्षिकोत्सव" को उद्देश्यले सन् १९८७ मा यस दिवसको स्थापना भएको थियो।
हरेक वर्ष, फेब्रुअरी २२ लाई "बिरालो दिवस" को रूपमा, बिरालोसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू र अभियानहरू आयोजना गरिन्छ, साथै बिरालासँग सम्बन्धित शैक्षिक गतिविधिहरू पनि आयोजना गरिन्छ। यस दिवसको लागि फेब्रुअरी २२ रोज्नुको कारण, बिरालो कराउँदा आउने आवाज "न्यान", "न्यान", "न्यान", जुन जापानी भाषाको "नि","नि", "नि" शब्दको सामान उच्चारण भएकोले हो भनिन्छ।
साथै, बिरालो दिवस संसारभर विभिन्न देशहरूमा मनाईन्छ, प्रायःजसो युरोपेली देशहरूमा World Cat Day भनेर फेब्रुअरी १७, रसियामा मार्च १ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा अक्टोबर २९ मा मनाईने गरेको देखिन्छ।
【‘विदेशीहरुका लागि आप्रवासन, आवास र राष्ट्रियता सम्बन्धि परामर्श’ को परिचय】
हरेक महिनाको दोस्रो आइतबारको दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म, प्रसाशनिक वकिलद्वारा तपाईंको प्रश्न र परामर्शको उचित सल्लाह दिनुहुन्छ। काउन्टर दिउँसो ३:३० बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
गोपनीयता कडा पालन गर्ने भएकोले ढुक्क भएर परामर्श लिनुहोस्I
विस्तृत जानकारीका लागि, फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९ मा सम्पर्क गर्नुहोलाI
सोमबारदेखि शुक्रबार ९:०० देखि १८:०० सम्म कल स्वीकार गरिन्छ I
【अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी परिवारिक कोठा वा एकल कोठामा बस्न तथा सहायक (RA) हुनका लागि आवेदन सम्बन्धि जानकारी】
फुकुओका शहर क्षेत्र भित्रको विश्वविद्यालय र स्नातकमा भर्ना भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागी, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी परिवारिक कोठा वा एकल कोठामा बस्न चाहानेहरु तथा RA अर्थात् सहायक हुन चाहानेहरुको आवेदन लिईदैछौं।
अन्तिम मिति फेब्रुअरीको २५ तारिक हो।
सर्नको लागी विद्यार्थीको योग्यता, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको गतिविधिहरुमा सक्रिय रूपमा भाग लिन सक्ने र सहयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
यस पटकको आवेदनमा, परिवारिक कोठामा एक्लै बस्न पनि सम्भव छ।